linoo-ayar: ြမန်မာအမျိုးသား - စံုတွဲ သဲေသာင်ြပင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုေြကာင့် ြပစ်ဒဏ်ချြခင်းခံရြခင်း
ြမန်မာအမျိုးသား - စံုတွဲ သဲေသာင်ြပင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုေြကာင့် ြပစ်ဒဏ်ချြခင်းခံရြခင်း
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 7:32 AM သတင်းများ
ြမန်မာအမျိုးသားအေရာင်းသမားတစ်ဦးသည် တရားရံုး၌ လူြမင်ကွင်းတွင် အြမင်မေတာ်ေအာင် လိင်ဆက်ဆံမှု ကျူးလွန်ခဲ့ြခင်းကို ြငင်းဆန်ခဲ့ြပီး Jumeirah ကမ်းေြခတွင် ၎င်း၏လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် အမျိုးသမီးနှင့် လိင်ဆက်ဆံရာ၌ မည်သူမှျ မြကည့်ခဲ့ဟု ဆိုပါသည်။ မှတ်တမ်းများအရ ၂၆နှစ်အရွယ် ြမန်မာလူမျိုး အေရာင်းသမားသည် ေသာင်ြပင်တွင် မိမိ၏ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက် အသက်(၂၀)အရွယ်ရိှ အမျိုးသမီးအေရာင်းသမားနှင့် လိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ယမန်ေန့က တရားသူြကီး Adnan Al Farra ရံုးထိုင်သည့် Dubai အယူခံ၀င်ခံုရံုးတွင် ပစ်ဒဏ်ေလှျာ့ေပါ့ေရးအတွက် ၎င်းတို့အတွဲမှ အသနားခံစာ တင်ထားပါသည်။
ြမန်မာလူမျိုးအေရာင်းသမားမှ ေြပာြကားသည်မှာ - ၎င်းသည် အရက်ေသစာေသာက်စားြပီးေနာက် အမျိုးသမီး အေရာင်းသမားနှင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ြပည်သူများအြမင်တွင် မဖွယ်မရာြပုမူခဲ့ြခင်း မဟုတ်ေြကာင်း၊ အေြကာင်းမှာ မိမိတို့နှစ်ဦးကို မည်သူမှျ ေစာင့်ြကည့်ြခင်း မရိှေြကာင်းြဖင့် ေစာဒက တက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအေရာင်းသမားမှ ေြပာြကားရာ၌ သူမ အမူးလွန်သွားသည့်အတွက် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် အများအြမင်တွင် သင့်တယ်မှုမရိှေအာင် မြပုလုပ်ခဲ့ပါေြကာင်း ဆိုပါသည်။
ြပည်သူများအသံုးြပုသည့် Jumeirah ကမ်းေြခတွင် ြပည်သူများအြမင်တွင် မတင့်တယ်ြပုလုပ်ခဲ့မှုအတွက် တရားစွဲြခင်းခံရေသာ အမှုြဖစ်ပါသည်။ အေစာပိုင်းတွင် Dubai တရားရံုးမှ ၎င်းတို့နှစ်ဦးကို အများအြမင်တွင် မတင့်တယ်ဖွယ်ရာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုအတွက် ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ြပီး၊ ေနာက်ဆက်တွဲတစ်လအြဖစ် အရက်ေသစာ သံုးစွဲမှုအတွက် ချမှတ်ခံခဲ့ရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စံုတွဲနှစ်ဦးသည် မိမိတို့၏ ြပစ်ဒဏ်များ ကျခံြပီးပါက တိုင်းြပည်မှ နှင်ထုတ်ြခင်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသနားခံစာ တင်သွင်းပါသည်။ ယခုအမှုမှာ ဒုတိယအမှုြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည် ရပါသည်။ ပထမအမှုမှာ ယခင်ေနွရာသီတွင် ြဗိတိသှျစံုတွဲနှစ်ဦးသည် ေသာင်ြပင်တွင် အရက်ေသစာ ေသာက်စားြပီး လိင်ဆက်ဆံမှုြပုလုပ်စဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရြပီး ေထာင်ဒဏ်(၃)လ ချမှတ်ခဲ့ြပီးေနာက် တိုင်းြပည်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
20 Response to 'ြမန်မာအမျိုးသား - စံုတွဲ သဲေသာင်ြပင်တွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့မှုေြကာင့် ြပစ်ဒဏ်ချြခင်းခံရြခင်း'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236622790366#c3297986443850516412'> March 9, 2009 at 11:19 AM
ရက်စက်တယ်ဗျာ၊ ယံုေတာင်မယံုနုိင်စရာေတွ တစ်ခုြပီး တစ်ခု၊ အင်း.....။ ေရွှြမန်မာ... ေရွှြမန်မာ... :(
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236624013522#c2024780606088458272'> March 9, 2009 at 11:40 AM
;) သူများအိမ်သွားေနြပီး အေနထိုင်ကလဲမတတ်ြက ဘယ်အိမ်ရှင်ကလက်ခံမှာလဲ။ စင်ကာပူမှာလဲြကည့်ေနတယ်။ အထိန်မရှိလို့လား ဘာလားမသိ ရထားေတွေပါ်မှာ အရမ်းနမ်းေနြပီဆို အဲဒါဗမာအတွဲပဲ ြဖစ်ြဖစ်ေနလို့။ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ေကာင်းတယ်။ ဘာကိုအြပစ်တင်ရမလဲ လဲမသိပါ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236639869922#c9187001457169808623'> March 9, 2009 at 4:04 PM
ကိုလင်းဦးေြပာတဲ့ အေရာင်းသမား ဆိုတာ အေရာင်းစာေရးလား? ဘာကိုဆိုလိုမှန်း ကွျန်ေတာ်မသိတဲ့အတွက် ေြဖြကားေပးပါ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236650758943#c8073484607202847798'> March 9, 2009 at 7:05 PM
wino >> ဟုတ်ကဲ့.... ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ သတင်းများကို ဘာသာြပန်၍ ေရးထားြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Source ကိုလည်း လိုက်ရှာပါတယ်။ သူတို့က ြမန်မာအမျိုးသား အေရာင်းသမားတစ်ဦးလို့ပဲ ေြပာထားပါတယ်။ ဘယ်က ဘာအေရာင်းသမားဆိုတာ မရှင်းြပထားပါဘူး။ ကျွန်ေတာ် သတင်းယူရာ Source ကို ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ သွားေရာက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ေကျးဇူးတင်ပါတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236655385120#c6023614219320746355'> March 9, 2009 at 8:23 PM
အိုး ေတာ်ေတာ်ပွင့်လင်းြကတာပဲ.ကုိခိုင်စုိးလမ် ေြပာသလုိ ြမန်မာနမ်းတာ မေတွ့ေသးဘူးဗျာ..
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236659464116#c451594793051351451'> March 9, 2009 at 9:31 PM
ကိုညီေမာင်ကို ေထာက်ခံပါတယ်။ ကိုလင်းဦးက သတင်းထူးေပးလို့ ေနာက်ဆုိ ဒီမှာလဲ ကမ်းေြခသွားရင် မျက်စိပွင့် နားစွင့်သွားပါ့မယ် :D
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236680400166#c3958572030296856997'> March 10, 2009 at 3:20 AM
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ။ East Coast ေရာက်ရင် လိုက်လံ သတိထားလိုက်ပါ့မယ်။ :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236682045227#c531325640959940650'> March 10, 2009 at 3:47 AM
" ေခတ်မီတာကိုလက်ခံပါတယ် ေခတ်လွန်တာကိုေတာ့ အခုထိလက်ခံလို့မရေသးလို့ ဒီလိုအြဖစ်ေတွကိုစိတ်ပျက်မိပါတယ်....... "
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236695229835#c6375972009990739927'> March 10, 2009 at 7:27 AM
ကုိလင်းဦးေရ... ကျွန်ေတာ်လည်း သတင်းစာကုိ အဆင်ေြပသလုိ Scanning လုပ်ြပီးပုိ့ေပးလုိက်တာ။ အဲဒီေန့က ဒူဘုိင်းမှာလည်း အရမ်းနံမည်ြကီးသွားတယ်။ www.gulfnews.com မှာေတာ့ မြကည့်မိဘူး။ အဲဒီေန့ 6. March နဲ့သတင်းကုိ ြပန်ရှာလုိ့ေတွ့ရင် Link ေပးလုိက်ပါ့မယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236697758044#c6022029261070382602'> March 10, 2009 at 8:09 AM
ဟူးလို့မှတ်ချက်ေပးသွားတယ် နည်းနည်းေတာ့ ဆင်ြခင်သင့်တယ်
♥ Acacia ♥
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236771609816#c6290301794006832734'> March 11, 2009 at 4:40 AM
ေရာ်... နဂိုကမှ... ဟူး..... အဲဒီ ဆပ်စလူးထစံုတွဲက အိမ်များမရှိြကဘူးလားမသိ... ေခတ်မှီလွန်ေတာ့ တရားေတာင်စွဲခံရတယ်... စလံုးကလူေတွကလည်း east coast မှာဆို ေမှာင်ရင် ေလှျာက်မြကည့်ြကနဲ့ ဟဲဟဲ...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236771974308#c9169726258407408090'> March 11, 2009 at 4:46 AM
မလွယ်ေရးချ ငသတ် မလွယ်ပါလားကွယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236782039374#c6085228443477125'> March 11, 2009 at 7:33 AM
EastCost သွားေချာင်းဦးမှ ရှိချင်ရှိနိုင်တယ်
နာမည်ြကီးလို ြကီးညားလူေတွ ရှိချင်ရှိမှာ း)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236790851958#c2143258907850043076'> March 11, 2009 at 10:00 AM
အခုတေလာ... ြမန်မာြပည်က စံုတွဲေတွလည်း...ပုိကဲလာြကသလိုပဲဗျ။ အီး... နာလိုလို့ ေြပာတာဟုတ်ဘူးေနာ်...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236850172790#c3502214392725060016'> March 12, 2009 at 2:29 AM
ကမ္ဘာေပါ်မှာ ြမန်မာြပည်ဟာ အယဉ်အေကျးဆံုး တိုင်းြပည်တစ်ခုပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားေလး က ကမ္ဘာ့အြပင်ဘက်ကို တေရွှ့2 ေ၀းလွှင့်ထွက်ခွာသွားြပီလို့ ခံစားမိပါတယ်။ အေတာ်ဆိုးတယ်။ ြမန်မာေတွ ေခတ်ေရှ့ေြပးရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ လိုက်မီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှန်တယ်ေနာ်။ ဒါမျိုးဆို အတုခိုးေတာ်တယ်။ ေကာင်းေရာ ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1236965123187#c8829489137377064247'> March 13, 2009 at 10:25 AM
ေရွှေတွ ေရွှေတွ ခက်ေတာ့ ခက်ေနြပီကွယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1237001921802#c8043212706457825230'> March 13, 2009 at 8:38 PM
နဂိုကတည်းက ြမန်မာဆိုရင် ေခါင်းငံု့ြကည့်ချင်တ ဲ့သူေတွကရိှေနတာကို နည်းနည်းေလးအေနအထိုင် မဆင်ြခင်ြကဘူး။ စိတ်ညစ်တယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1237086839547#c7013438543669480529'> March 14, 2009 at 8:13 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1238227589712#c1780907361200343301'> March 28, 2009 at 1:06 AM
အေရာင်း၀န်ထမ်းပါ ။ Dubai International Airport မှာ ရိှတဲ့ Dubai Duty Free ဆိုင်ေတွမှာအလုပ်လုပ်ြကပါတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html?showComment=1238298242861#c8543841609561173559'> March 28, 2009 at 8:44 PM
အခုလို လာေြပာတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါ ကိုေပးဆပ်သူေရ....